ASUS ကြေညာလိုက်တဲ့ ROG Series Gaming Laptop အသစ်များ
2020 နွေဦးရာသီအတွက် Intel ၊ Nvidia တို့ကနေ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Processors ၊ Graphics Card အသစ်တွေ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Gaming နဲ့ Content Creation မှာသုံးဖို့ Generation Refresh လုပ်တာဖြစ်သလို ထုတ်ကုန်အသစ်တွေက 10th Generation Comet Lake Processors ၊ RTX SUPER Mobile Chip တွေပါ။
Intel ကနေ 10th Generation Line-up မှာ Comet Lake အနွယ် U-series Processor တွေကို Budget နဲ့ Mid-Range Laptop တွေ အတွက် ကြေညာခဲ့ပြီးသားပါ။ အခု Comet Lake တွေက H-series တွေဖြစ်ပြီး 8-cores. 16-threads အပြင် Turbo Boost ကို Laptop တွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံး 5.3GHz အထိ ထောက်ပံ့ထားပါပြီ။
RTX Line-up မှာတော့ SUPER Series ကို Mobile Class အတွက် ကြေညာတာပါ။ RTX 2080 SUPER ၊ RTX 2070 SUPER အပြင် RTX 2060 GPU အသစ်တို့ ပါဝင်လာတယ်။ Turning Architecture ကိုပဲ အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် DLSS 2.0 Advanced နည်းပညာ အသုံးပြုထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် DirectX 12 Title တွေမှာ Improve ဖြစ်လာမယ်လို့ သုံးသပ်ရပြီး အခုဖော်ပြသွားမယ့် ဆောင်းပါးထဲမှာ Republic of Gamers (ROG) Gaming Laptop အသစ်တွေအကြောင်း ပြောသွားမှာပါ။ အရင်ဆုံး Modelling လုပ်ကြတာပေါ့။
Innovative အဖြစ်ဆုံး ထုတ်ကုန်တစ်ခုလို့ တင်စားနိုင်တဲ့ Zephyrus Duo 15 ဟာ Zenbook Pro Duo အမွေဆက်ခံထားတဲ့ Gaming Plus Creator လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Laptop တစ်လုံးကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Hardware တွေချည်း စွတ်ထည့်တာထက် Usability ကို ဘယ်လို Extend လုပ်မလဲ ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ ASUS နည်းပညာတွေက နှစ်သက် အားရစရာပါ။
အခုလည်း 14.1” အရွယ် ScreenPad Plus ကို ထည့်ပေးလိုက်ပြီး Gaming Oriented ဆိုတော့ Twitch ၊ Discord Panel ကို Second Screen မှာ Streaming သုံးမလား Chat မလား ပိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ 4K Resolution (3,840 x 1,100) ပါဝင်တဲ့အပြင် မြင်ဖူးနေကျအတိုင်း Main Panel နဲ့ Keyboard အကြား နေရာယူထားမှာပါ။
တစ်မူ ထူးခြားသွားတာက Laptop ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်ကို 13° လောက် ကြွတက်လာမှာဖြစ်ပြီး ပထမအချက်က လေဝင်လေထွက် ပိုကောင်းသွားစေတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ScreenPad အောက်မှာ Powerful Components တွေ စုဝေးနေတဲ့အပြင် Cooling Solution နဲ့လည်း ကပ်နေတဲ့အတွက် အပူက အန္တာရာယ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။
ASUS အဆိုရ အေးမြနေတဲ့ လေကို အပေါ်ကနေ စုပ်ယူနိုင်ပြီး 28.5mm Air Intake စနစ်ကနေ Cooling ပိုင်း အားကောင်းစေမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ AAS (Active Aero Dynamic System) ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Core i9 Chip နဲ့ RTX 2080 SUPER လို ပါဝါအသားကုန်စား၊ အပူထွက်မယ့် အတွဲကို Cooling ကောင်းကောင်း အုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Display ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Gaming နဲ့ Creation နှစ်မျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပြီး 300Hz FullHD ဒါမှမဟုတ် 4K UHD Option ပါဝင်လာမှာပါ။ 100% sRGB ၊ Pantone Certified Display ဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးစွဲသူအလိုကျ ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
Gaming ပိုင်းမှာ G-Sync နည်းပညာ ထောက်ပံ့ထားတဲ့အတွက် Minimum Tearing အဖြစ်ဆုံး Gameplay ရရှိမှာဖြစ်သလို ပါဝါသုံးစွဲမှု ချွေတာချင်ရင် Nvidia Optimus Mode နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Immersive Gameplay အတွက် ဟန်အကျဆုံး Screen Size က 17.3” အရွယ် Gaming Laptop တွေပါ။ တချိန်တုန်းက အရွယ်စားကြီးမားတာရယ်၊ ထူထဲပြီး လေးလံတဲ့အတွက် 17 Incher ကို အထိုင်သုံးဖြစ်တာ များပါတယ်။
Powerful Component တွေ အသုံးချဖို့ Cooling လုံလောက်ဖို့ လိုတာကြောင့် ပါးလွှာတဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ မြင်ရခဲတယ်။ Zephyrus S17 မှာတော့ 18.7 mm အရွယ်စား Chassis နဲ့အတူ Portability ပိုင်း အားဖြည့်ထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း အားရစရာဖြစ်အောင် Housing လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Core i7 Processor အထိ အမြင့်ဆုံး ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်သလို 17 Incher ရဲ့ 300Hz (3ms GTG) မြန်နှုန်းရှိ Refresh Rate ထောက်ပံ့ဖို့ RTX 2080 SUPER GPU သုံးစွဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။ အခုလို High-end Build အတွက် Performance က ရေလည်မိုက်သလို Cooling လည်း နိုင်နိုင်အုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒိအတွက် AAS Cooling System ကို အမွေဆက်ခံထားစေပြီး System ပိုင်းထူးခြားချက်တချို့ကတော့ Zephyrus S17 မှာ Pantone Certified Display သုံးထားပါတယ်။ G-Sync Mode နဲ့အတူ Blazing Fast Gameplay ကို eSports Title တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Optimus Mode နဲ့ စွမ်းအင်ချွေတာဖို့ အကန့်ခွဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
17.3” က အရွယ်စားကြီးသလို AAS System အတွက် Cooling Solution ကို နေရာကောင်းကောင်း ပေးထားပါတယ်။ အခုလို Spacing များများယူလိုက်ရပေမယ့် Keyboard အပိုင်းမှာ လစ်ဟင်းသွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
Per-key RGB ပါဝင်တဲ့အပြင် Full Desktop Size Keyboard လိုသုံးနိုင်တဲ့အထိ နေရာအလုံလောက်ရှိတဲ့အတွက် Zephyrus S17 သုံးရင် တမျိုးတဖုံ Experience ရရှိဦးမှာပါ။ Keyboard နဲ့အတူ ညာဖက်မှာ တွဲထည့်ပေးလာတဲ့ ROG NumberPad က Touchpad အနေနဲ့ပါ သုံးနိုင်အောင် Integrate လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 17.3” Class မှာ Portable ဖြစ်ပြီး အများနဲ့မတူတဲ့ အသွင်ပြင်ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ASUS အနေနဲ့ Thin & Light Class မှာ Performance ပိုင်း လစ်ဟင်းမှု မရှိစေရဘဲ သုံးစွဲသူတွေကို Gaming Experience ပေးစွမ်းမယ့် မော်ဒယ်က Zephyrus S15 ပါ။ Construction Materials တွေကို Magnesium ၊ Aluminium သတ္ထုစပ်နဲ့ ဖွဲ့စည့်ထားပြီး Zephyrus S17 ၊ Duo 15 တို့နဲ့ ကွာခြားသွားတဲ့ အဓိက Point က Honeycomb Reinforcements အသုံးပြုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တမျိုး ပြောရင်တော့ S15 ဟာ Build Quality ပိုင်းမှာ တမူထူးခြားတဲ့ နည်းပညာအသုံးပြုထားပြီး 18.9mm အထူရှိတဲ့ ကိုယ်ထည်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ Honeycomb Texture ကြောင့် ချောမွေ့တဲ့ခံစားမှု ရရှိမယ့်အပြင် သတ္ထုကိုယ်ထည်မှာ လက်ဗွေရာ ထင်လွယ်တာမျိုး ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာပါ။
Thin & Light Class အတွက် Challenge ဖြစ်နေတာ Thermal Management ပါ။ အများသောအားဖြင့် i7 Chip တွေ Run ပေးနိုင်ပေမယ့် Max-P ကတ်တွေကို ကောင်းကောင်း Handling လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိကြပါဘူး။ Zephyrus S15 မှာတော့ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးထားပြီး 8-cores i7 နဲ့ RTX 2080 SUPER GPU အထိ Support လုပ်ပါတယ်။
ဒီလိုစွာသွားရတဲ့ အကြောင်းပြချက်က AAS System ပါဝင်လာတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် Heat Zone ဖြစ်တဲ့ Centre နေရာမှာ Liquid Metal နဲ့ အစားထိုးလိုက်လို့ပါ။ ပြောရရင်တော့ Cooling Solution က Heat Pipe အရွယ်စား ပိုကြီးလာတာထက် အပူစုပ်ယူအားကောင်းပြီး စွန့်ထုတ်အားပိုကောင်းတဲ့ နည်းပညာကြောင့် Thermal Management ပိုကောင်းလာတာပါ။
Gaming Laptop တော်တော်များများ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်ပေးတာထက် Stable ဖြစ်နေဖို့ Operating Temperature က 70° C ထက် မကျော်သင့်ပါဘူး။ အကယ်လို့ Increase ဖြစ်လာခဲ့ရင် ပန်ကာပိုလည်ပေးရတဲ့အတွက် အရမ်း Annoying ဖြစ်လွန်းတာပါ။
အခု Zephyrus S15 မှာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ AAS + Liquid Metal Solution က ဆူညံသံတွေ ဖယ်ရှားပေးမယ့်အပြင် Blazing Fast Gameplay အတွက် 300Hz Refresh Rate ပါဝင်တဲ့ Full HD Panel အထိ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
Nvidia G-Sync နဲ့အတူ Optimus Mode ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး Storage Configuration မှာ M.2 SSD နှစ်ချောင်းကို Super RAID0ထိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Zephyrus M စီးရီးတွေကတော့ Affordable Price Level နဲ့ ဂိမ်မာတွေကို ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးပါ။ Zephyrus S စီးရီးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ပုံခြင်း Sharing လုပ်ထားပေမယ့် AAS Cooling System မပါဝင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် M15 မှာ 8-cores i7 Chip အပြင် GTX 1660 Ti ကနေ RTX 2070 အထိ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိမှာပါ။ Smooth Gameplay အတွက် 144Hz သို့မဟုတ် 240Hz Full HD Panel အပြင် 4K UHD Display ကို Optional အနေနဲ့ Zephyrus M စီးရီးမှာ ထည့်ပေးထားပါပြီ။
Build Quality ပိုင်းမှာ Zephyrus S15 နဲ့ တူညီလုနီးပါးရှိပြီး Honeycomb Texture အပြင် Reinforced Magnesium သတ္ထုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ Audio ပိုင်းအတွက် ESS DAC Driver နဲ့ ပံ့ပိုးထားပြီး M.2 Slot နှစ်ခုပါဝင်တယ်။
Zephyrus M15 မှာ Thunderbolt3ချိတ်ဆက်မှုအပြင် USB Ports တွေ စုံစုံလင်လင် ပါဝင်တဲ့အတွက် Thin & Light Class မှာ Connectivity ပိုင်းတွက် ပြည့်စုံမှုရှိတယ်။ စတိုင်ကျပြီး ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက် တန်ဖိုးသင့် Slim Gaming Laptop တစ်လုံးအဖြစ် စဥ်းစားနိုင်မှာပါ။
အခုလို ROG Line-up မှာ Zephyrus Refresh အပြင် Performance တန်းမှာ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ Strix မော်ဒယ်အသစ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Strix တွေက Thin & Light ဖက်မသွားပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Powerful Components တွေကို ထွေးပိုက်ထားတဲ့ Top-notch Gaming Laptop တွေပါ။
သုံးစွဲသူတွေကို အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် Unlock လုပ်ခွင့်ပေးမယ့် ROG Boost နည်းပညာပါဝင်လာပြီး 2020 Refresh မှာ ထူးခြားလာတာက Liquid Metal Cooling အသုံးပြုလာတာပါ။ ဒီနည်းပညာ အားသာချက်က CPU နဲ့ GPU ကို အမြင့်ဆုံး Frequencies ကို အချိန်အတိုင်းတာ တစ်ခုထိ ပိုကြာကြာ Run နိုင်စေမှာဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်က ထွက်လာတဲ့ အပူကို ကောင်းကောင်း Handle လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Advanced Cooling နည်းပညာပါ။
ဒါကြောင့် Strix စီးရီးဟာ AAA ဂိမ်းတွေအတွက် Powerful ဖြစ်သလို တန်ဖိုးအားဖြင့်လည်း သက်သာတယ်။ Storage Configuration မှာလည်း Dual NVMe SSD အထောက်ပံ့ပါဝင်တဲ့အပြင် စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး Components တွေ ချည်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် Gaming Laptop တွေပါ။
Scar စီးရီးတွေက ROG Line-up မှာ အထင်ကရ ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ပြီး 2020 Refresh မှာတော့ 300Hz Panel ကို ထောက်ပံ့ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ AAS System မပါလင့်ကစား Scar မော်ဒယ်သစ်မှာ i9-10980HK Processor ၊ RTX 2080 SUPER (2070 for 15) လို အကြမ်းဆုံး Beast နှစ်ကောင်ကို ထိန်းကြောင်းနိုင်မယ်။
32GB DDR4 3200MHz RAM ထောက်ပံ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Performance ပိုင်းမှာ တော်တော်လေးကို စွာနေပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Scar 17 မှာ CPU ကို Full Potential နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Game တစ်ခုထဲသာမက Benefits ဖြစ်မယ့်အပြင် CPU Intensive အလုပ်တွေအတွက် မြန်ဆန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ရရှိဦးမှာပါ။
တခြား ထူးခြားချက်တွေက စိတ်ကြိုက် Customize လုပ်နိုင်မယ့် RGB LED Lighting Effect ပါဝင်မယ့်အပြင် NFC နည်းပညာ အသုံးပြုထားမယ့် ROG Keystone II ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီကောင့်ကို Armoury Crate Software ကနေ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Shadow Drive အနေနဲ့ Windows 10 Pro မှာ အသုံးပြုလို့ ရမှာပါ။
Srrix G စီးရီးတွေက Budget Friendly Laptop တွေအဖြစ် အသိများကြပါတယ်။ တန်ဖိုးသင့် Class ထဲ ပါဝင်လာပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျမှုမရှိအောင် တည်ဆောက်ထားပြီး တမျိုးတဖုံ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။
Strix G စီးရီးသစ်မှာ Core i7 Processor အထိ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Nvidia SUPER GPU ကို RTX 2070 အထိ အမြင့်ဆုံး တင်သုံးနိုင်မှာပါ။ အခုလို System Performance ပိုင်းမှာ အားဖြည့်ထားသလို G17 နဲ့ G15 နှစ်မျိုးလုံံးမှာ 144Hz သို့မဟုတ် 240Hz Refresh Rate Panel တွေကို ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
ထူးခြားချက်ကတော့ Stix G အသစ်တွေမှာ အရောင် ၃ မျိုးနဲ့ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Glacier Blue ၊ Original Black နဲ့ Electro Punk Colour တွေပါ။ Electro Punk ကတော့ Strix G Line-up မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Option အသစ်ဖြစ်ပြီး 35 x 17” အရွယ်စားရှိ Electro Punk Mat နဲ့ တွဲရက်ထည့်သွင်းထားမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ROG Strix Go Core Electro Punk Headset ၊ ROG Impact II Gaming Mouse နဲ့ Special Edition ROG Backpack တို့ပါဝင်ပါသေးတယ် (ဒါမယ့်လည်း ဒီ Bundle က နေရာဒေသအလိုက် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်)
Zephyrus နဲ့ Strix စီးရီးတွေရဲ့ အားသာချက်များ
အခုလို 2020 နွေဦးရာသီအတွက် ထွက်ရှိလာမယ့် ROG Series Gaming Laptop တွေအကြောင်း သိသွားပြီဆိုတော့ ပါဝင်လာတဲ့ နည်းပညာထူးခြားချက်တွေအကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။
Intelligent Cooling with Liquid Metal Compound
Liquid Metal လို့ ပြောနေကြတယ်၊ သူ့ရဲ့ အားသာချက်က ဘာလဲ? အလွယ်ကူဆုံး ပြောရင်တော့ CPU နဲ့ GPU လို Power Load များလာတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ အပူကို အကောင်းဆုံး စုပ်ယူပေးနိုင်မယ့် Compound တစ်မျိုးပါ။
များသောအားဖြင့် CPU နဲ့တွဲလျက် ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးလို့လည်း ပြောနိုင်သလို ထူးခြားသွားတာက Operating Temperature ကို တခြား အပူစုပ်ပစ္စည်းတွေထက် လျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ သူ့တစ်ယောက်ထဲ မပြီးသလို ထွက်လာတဲ့ အပူကို အေးမြသွားစေဖို့ ပန်ကာတွေကလည်း ပံ့ပိုးရပါတယ်။
ပြောရင်တော့ Liquid Metal ပါဝင်တာ CPU အတွက် အပူလျော့နည်းသွားစေသလို သီအိုရီအရ Temperature နည်းလေ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလေဆိုတော့ Zephyrus ၊ Strix မော်ဒယ်သစ်တွေမှာ 10% လောက် Performance တင်ပေးနိုင်မှာပါ။
အခုလို Default တန်ဖိုးထက် ပိုများလာတဲ့ အချက်တစ်ချက်က System တစ်ခုလုံးကို အေးမြနေစေဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ Fans တွေနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ROG n-blade လို့ နာမည်တွင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းမှာ ဒလက်ပေါင်း ၈၃ ခုအထိ ပါဝင်ပြီး လေဝင်၊ လေထွက်အားကို သာမန်ဒီဇိုင်းတွေထက် 17% စုပ်ယူ၊ မှုတ်ထုတ်ပေးနိုင်လို့ပါ။
ခေတ်ပေါ် Gaming Laptop တွေမှာ i7 Processor ၊ GTX Graphics ကတ် ကောင်းကောင်းသုံးထားရင်ပဲ ဂိမ်းဆော့တာထက် Light Editing သုံးမယ် ဒါမှမဟုတ် Professional Work တစ်ခုခုမှာ သုံးဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပါဝင်ပြီးသားပါ။
အရမ်း Responsive ဖြစ်တဲ့ 240Hz တို့ 300Hz တို့ဆိုတာ Game အတွက် သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ အပိုင်း၊ ဒါမယ့် Ultra Smooth ဖြစ်နေတဲ့ Screen ကို ဂိမ်းမဆော့ရင်တောင် ချောမွေ့မြန်ဆန်တဲ့ Experience ကို ရစေတယ်။
ဒါကိုမှ Screen Tearing မဖြစ်တဲ့ G-Sync နည်းပညာကိုပါ Zephyrus မော်ဒယ်တွေမှာ ထည့်ပေးထားလို့ ဂိမ်းကောင်းကောင်းဆော့လိုသူတွေ အကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီလို ဂိမ်းအတွက် မရည်ရွယ်ဘူးဆိုရင်တောင် Creator Laptop အနေနဲ့လည်း သုံးနိုင်အောင် Pantone Certified Display ထည့်ပေးထားပါတယ်။
sRGB ၊ AdobeRGB အထောက်ပံ့နဲ့ Photo ၊ Video Editing မှာ သုံးနိုင်တယ်။ ဒိထက် တဆင့်တက်ချင်ရင် 4K UHD Panel ကိုပါ ရွေးချယ်နိုင်လို့ Gaming + Creator နှစ်မျိုး ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Laptop တွေလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ စမတ်ဖုန်း၊ Tablets တွေနဲ့ Laptop PC တွေကို လွယ်လင့်တကူ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေကျတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ ROG Series Laptop တွေမှာ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Wi-Fi6(802.11ax) နည်းပညာကို မော်ဒယ်အားလုံးမှာ အသုံးပြုပေးထားပြီး 40Gbps အထိ မြန်ဆန်လာတဲ့ Thunderbolt3Port (Type-C) ကို Zephyrus S ၊ Duo နဲ့ M တွေမှာ ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီ Port ကတဆင့် 4K UHD Display နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက် ချိတ်ဆက်နိုင်မယ် ဒါမှမဟုတ် Desktop Class Graphics Card ပါဝါကို သုံးစွဲနိုင်မယ့် ROG XG Station Pro Thunderbolt3eGPU dock နဲ့ပါ တွဲဖက်နိုင်မှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Laptop တစ်ခုလုံးကို ပါဝါကျွေးဖို့ အသုံးပြုရတဲ့ Adapter တုံးကြီးတွေပါ။ 230W Power Deliver လုပ်ပြီဆိုရင်ပဲ Adapter က Weigh ရှိလာသလို Laptop နဲ့ပါ တွဲသယ်ရရင် ပိုလေးမှာပါ။ ဒီအတွက် ROG Engineer တွေ ဖြေရှင်းပေးထားပြီး 240W Power Delivery လုပ်နိုင်တဲ့ Adapter ကို 20% သေးငယ်အောင် လုပ်ထားသလို ပါဝါထောက်ပံ့မှုအပိုင်းမှာလည်း လျော့ကျမှုမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ASUS Myanmar Press Release ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ASUS Gamming Laptop Homepage
Reno3 စီးရီး စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ Display ပိုင်း Performance ပိုင်း ထူးခြား အားသာချက်များ